Ngaba kukho into efana nolwazi olubi lwe-SEO?
Nonke mhlawumbi nibhekane neetoni zomxholo malunga nokuphuculwa kwenjini ye-intanethi kwi-intanethi. Ukuba ubuncinane ubuncinane bamava kulo mkhakha, unokwazi ukwahlula phakathi kweengcebiso ze-SEO kunye neengcebiso (njenge-MOZ, iSemalt okanye i-Search Engine Journal) enikezelayo kwaye ngamanye amaxesha ingcaciso engalunganga malunga neenkqubo zokulungiselela ukubonelela ngeenkonzo ezingezizo.Nangona kunjalo, ukuba ungumthunywa omtsha kwi-digital field, ezinye iinqununu zekhwalithi zinokudideka kuwe kwaye zidibanise i-Google rankings. Kule khokhelo elifutshane, ndiza kukunika iingcamango ziphi na iingcamango ezingalunganga ze-SEO ozifunayo ukukhusela ukwenza ishishini lakho kwi-intanethi liphumelele.
Inkcazo yolwazi olubi lwe-SEO
Ukuba uyazibuza ukuba yiyiphi into embi ye-SEO, ndikucebisa ukuba ufunde eli nqanaba ngokucophelela. Umxholo ombi we-SEO NGONKE ngexesha elidlulileyo, elingenalusizo nangaphandle kwemida yemigangatho yolwazi ye-injini - lost super seeker ato. Kulula ukwahlula umxholo we-SEO ombi njengoko ngokuqhelekileyo uqala ngamagama "indlela endinokuphucula ngayo i-website yami ye-SEO ngosuku "U. Ngokuqhelekileyo, amanqaku amanqaku aqulethe i-subtext ethile yokuphromotha. Iingcali ze-Black-hat ze-SEO zivelisa uhlobo olunjalo lwamabakala angakholwanga ukukhuthaza iinkonzo zabo. Ndicebisa ukuba awuyikulufunda olu hlobo lwamanqaku njengoko bengathwali naluphi na ulwazi oluxabisekileyo. Ukongezelela, ubeka ingozi ekubhubhiseni i-website yakho kwi-rankings ngokulandela i-tips-SEO tips. Ngoko makhe sixoxe ngeliphi iqhinga elisebenzayo esikufunekayo ukuze sigweme ukulimaza idumela lethu lesayithi.
Enye yeengcebiso ezidlulileyo kwixesha lexesha le-SEO ligama elingundoqo. Njengoko i-Google ibe yingqiqo yonke imihla, olu hlobo lokulungiselelo luqhuba ikhosi. Kule mihla, kufuneka udale umxholo wakho kwiindwendwe zewebhusayithi, kungekhona kwi-bots search. Ngaphezu koko, i-Google bots ingahlola umgangatho wakho wokuqukethwe kwaye ubale inani lamagama angundoqo. Ukuba unamagama angaphezulu kwamahlanu ngephepha ngalinye, ubeka ingozi ukufumana izigwebo zeGoogle. Ngaphezu koko, umxholo ofakwe kwizinto ezingafundwayo kwaye awunakunceda kubasebenzisi njengoko kwadalwa kuphela kwiinjongo zentengiso. Esikhundleni sokugxotha umxholo wakho ngamagama angundoqo, kufuneka ukhethe ibinzana eziphambili kunye nezitrato zentshukumo yezithuthi kwaye uzifake kwiibhloko zakho, iinkcazo, iziqendu zokuvula, ii-ALTs kunye namaxesha amaninzi kwimiyalezo.
Abanye ababizwa ngokuba yi-SEO iingcali bathi. Nangona kunjalo, isigwebo esingalunganga. Ngokushicilela okuqukethwe okuphindiweyo, uqhuba iinjongo zokukhangela ukuba uzibone izinto ngendlela ofuna ngayo endaweni yokuba. Ngoko, umxholo ongeyonto yangaphambili ungabangela ukulahla kwiziko lakho lewebhu. Kukho ipesenti encinci ukuba unokufumana izigwebo zeGoogle zokufumana umxholo wokuphinda. Nangona kunjalo, awuyi kuphucula ngokuthe ngqo indawo yakho yesayithi kwi-intanethi ngokuvelisa ikopi-ekhutshelwe umxholo njengoko iGoogle sele inomxholo ofanayo kwi-index yayo. Ukuba ufuna ukufumana umxholo wokuphindaphinda kwisayithi yakho ngenxa yeemfuno zeshishini ezifanayo, kufuneka "ungabikho nkcazo, kwaye akukho mlandele" lo mxholo ukuphepha nayiphi na imiphumo emibi.